Kala -soocidda & Miisaanka Mashiinnada Soo -saareyaasha & Alaab -qeybiyeyaasha - Warshadda Mashiinka Mashiinka Miisaanka iyo Miisaanka
Farshaxanka Elektaroonigga ah ee Farshaxanka Farshaxanka Fruits Mashiinka Darajada PLC, sirdoon aad u sarreeya, isku -darka miisaanka, hawlgalka macquulka ah iyo tirakoobka. Lakabka ka-hortagga waxyeellada ee qalabka shaqada ee dusha ka shaqeynaya wuxuu qaataa tetrafluoroethylene si loo hubiyo hawlgalka habsami leh ee qalabka, buuqa hooseeya iyo cimri dhererka adeegga. Tayo wanaagsan, heerka guuldarrada hoose iyo cimri dheer. Hawlgal fudud iyo hawlgal lagu kalsoonaan karo. Hawlgalka, hagaajinta, badbaadinta walwalka iyo shaqada-savin ...
Warshadda Tooska ah Iibka Baaraha Wershadaha iyo Mashiinka Miisaamida Dhammaan Mashiinnada Dhan oo lagu Sameeyay Shiinaha
Iibinta Tooska ah ee Warshadda Mashiinka Kala -soocidda Miisaaniyadda Dhaqaale ee ugu badan oo laga sameeyay Shiinaha oo ku habboon Ogaanshaha Miisaanka & Noocyada Kala -soocidda: 1. Qaab -biraha birta ah ee aan la xoojin; wuxuu buuxiyaa shuruudaha nadaafadda ee soosaarka cuntada iyo dawada 2. Isticmaalka dareemayaal sax ah; teknolojiyadda farsamaynta dhijitaalka dhijitaalka ah ee xawaaraha sare leh 3. Miisaanka firfircoon farsamada magdhow otomaatig ah; dhibic eber ah oo si toos ah loola socdo 4. 100 hore u -soo -saarka; tafatirka badeecada fudud iyo kaydinta 5. Beddelidda badeecadda degdegga ah iyo is-barashada f ...
Warshadda Tooska ah Iibinta Xawaaraha Sare ee Biyo -la'aanta ah Weelka Miisaanka Hubinta Mashiinka Mashiinka Diidmada Miisaanka
Iibinta Tooska ah ee Warshadda Inta ugu badan Mashiinka Kala -soocidda Miisaaniyadda Dhaqaalaha ee lagu Sameeyay Shiinaha Halbeegga Farsamo frame Qaab -dhismeedka bir -birta aan la xoojin; buuxiyaan shuruudaha nadaafadda ee wax soo saarka cuntada iyo daawada ● Adeegsiga dareemayaal sax ah; oo ku salaysan tiknoolajiyadda farsamaynta dhijitaalka dhijitaalka ah ee heer sare ah dhibic eber ah falanqayn otomaatig ah iyo teknolojiyadda raadraaca ● 100 hore u -soo -saarka; tafatirka badeecada fudud iyo kaydinta switch Beddelidda badeecadda degdegga ah iyo hagaajinta otomaatiga ah
Iibinta Tooska ah ee Warshadda oo La Habayn Karo Mashiinka Kala-soocidda Miisaanka Dhaqaalaha Badankiisa CWC-160HS/230NS/300NS oo lagu Sameeyay Shiinaha oo Ku Haboon Ogaanshaha Miisaanka & Kala-soocidda
Iibinta Tooska ah ee Warshadda oo La Habayn Karo Mashiinka Kala-soocidda Miisaanka Dhaqaalaha Badankiisa CWC-160HS/230NS/300NS Si Loo Ogaado Miisaanka & Noocyada Kala-soocidda frame Qaabka birta ka samaysan biraha aan la xoojin; buuxiyaan shuruudaha nadaafadda ee wax soo saarka cuntada iyo daawada ● Adeegsiga dareemayaal sax ah; oo ku salaysan tiknoolajiyadda farsamaynta dhijitaalka dhijitaalka ah ee heer sare ah dhibic eber ah falanqayn otomaatig ah iyo teknolojiyadda raadraaca ● 100 hore u -soo -saarka; tafatirka alaabta fudud iyo kaydinta ● Ra ...
Farshaxanka Farshaxanka Farshaxanka ee Mashiinka Mashiinka Kala -saaridda Mashiinka
Faa'iidooyinka iyo codsiyada Mashiinka Kala -soocidda Elektiroonigga ah: Qalabku wuxuu leeyahay hufnaan sare, sax sax ah, dusha shaqada oo ballaaran iyo baaxad codsi oo ballaaran. Midhaha oval sida avokado, tufaax, isteroberi, persimmon, basasha cagaaran, cambaha, liinta, miraha canabka ayaa la kala saari karaa. Xakamaynta PLC, sirdoon aad u sarreeya, isku -darka miisaanka, hawlgalka macquulka ah iyo tirakoobka. Lakabka ka-hortagga waxyeellada ee aaladda shaqada ee qalabka ayaa qaadata tetrafluoroethylene si loo hubiyo jilicsanaanta ...
Baaxad Weyn ee Polyetylen Caaga Filinka Mashiinka
Dulmarka Faahfaahinta Degdegga ah mugga qaybta bannaan: 2L Caaga La Sameeyay: Xaaladda PET: Codsi Cusub: Dhalo Afuufidda Nooca Nooca: Cirbadda Afuufa Molding Meesha Asalka: Shanghai, Shiinaha Magaca Magaca: JP ...
Farsamaynta Naqshadaynta Sare ee Mashiinka Kala -soocidda Tamaandhada
Guudmarka Faahfaahinta Degdegga ah ee Warshadaha lagu dabaqi karo: Lambarka Tusaalaha Warshadda Cuntada & Cabbitaanka: JPFJM2000 Magaca Calaamadda: Jumpfruits Meesha Asalka: Korontada Shiinaha: 220V/380V Awoodda: 0.75kw Dimension (L*W*H): 2.2*0.7*1.1m ...
Dhaqidda Miraha Cusub ee Warshadaha Qalajinta Kala -soocidda iyo Khadka Xidhmada
Guudmarka Faahfaahinta Degdegga ah Qalab ceyriin ah: Midho, Khudaar, Midho, Lambarka Moodeelka: JP-FJL001 Magaca Calaamadda: JUMPFRUITS Meesha Asalka: Shanghai, Shiinaha Voltage: 220v/380V Power: 20kw Dimension (L*W*H): TWO 40 ' FCL ...
Midhaha Tooska ah ee Warshadaha Iyo Khudaarta Mashiinka Kala -soocidda Sawir -qaade
Guudmarka Faahfaahinta Degdegga ah Xaaladda: Meesha Cusub ee Asalka: Shanghai, Shiinaha Magaca Calaamadda: Lambar Model OEM: JUMP-FQJL Nooca: LINE PROCESSING Voltage: 220V/380V Awoodda: 3kw Miisaanka: 20 ...
2-50T Awoodda Midhaha iyo Nadiifinta Qudaarta iyo Mashiinka Kala-soocidda